Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka xogwaramay dagaaladii ugu dambeeyay ee cadawga lagu naafeeyay
Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka xogwaramay dagaaladii ugu dambeeyay ee cadawga lagu naafeeyay
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo farabadan oo lagu wiiqay ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya.Dagaaladaa oo meela kala duwan oo dalka ah ka socda ayaa kuwa aynu helnay warbixintooda waxay u dhaceen sidan;
30/9/13 Baahanemadow oo Galaalshe katirsan dagaal kudhexmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa ciidamada dulmiga iyo doolka kujooga ciida Ogadenia ee wayaanaha lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa laga dhaawacay.
30/9/13 Tuli oo Galaalshe katirsan dagaalo 2 jeer kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay inkabadan 11 askari 13 kalana waa laga dhaawacay.
Isla 30/9/13 Dhalu oo Jigjiga katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 4 askari 7 kalana waa laga dhaawacay.
3/10/13 Quruuraxle oo dagmada Xamaro katirsan dagaal kulul oo kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 17 askari 8 kalana waa laga dhaawacay.
3/10/13 Gadhbalaayo oo Galaalshe katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagaga gubay 1 baabuur oo isaga iyo wixii saaraaba islabasbeeleen.
3/10/13 Bulbul oo Garigo’an katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
4/10/13 Kuusxaraar oo Baabili katirsan iyo Golabeer oo garigo’an katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay inta lahubo 2 askari 4 kalana waa lagadhaawacay.
5/10/13 Baligalool, Garigo’an, Golnabaadiino, Geelnuujis iyo Malayko oo Garbo kawada tirsan iyo Dhuure oo Qabridahare katirsan dagaallo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh waxaan inta lahubo kaga bakhtiday 9 askari 11 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/10/13 Biyoduul oo Dhagaxmadow katirsan waxaa ciidamada nacabka lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
7/10/13 Hagoog oo Dhanaan katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa laga dhaawacay.
7/10/13 Birqod waxaa ciidamada wayaanaha lagaga gubay 1 baabuur oo ay islabsbeeleen isagii iyo wixii saaraaba.
8/10/13 Dhamaajaale oo Shilaabo katirsan iyo Karinka’ismariye oo Jigjiga katir waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
10/10/13 Biyoguun oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
11/10/13 Haariban oo dagmada Shilaabo udhaw waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/10/13 CWXO ayaa weeran kuqaaday garoonka dayuuradaha ee Magaalada Qabridahare hugunka rasaasta ayaana laga maqlayay daafaha magaalada waxaana lagu soowaramayaa in ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare xoogan.
waa ilaahay mahaddiis.
CWXO allaah ha garab galo…